Ergooyinka Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Horumarinta Gobolka Washington|Ergooyinka Ganacsiga
Abuurista Fursado Cusub iyada oo loo marayo Ergooyinka Ganacsiga Caalamiga ah
Ergooyinka ganacsi waa aalad muhiim u ah suuqgeynta gobolka. Maaddaama tiknoolajiyaddu beddeshay habka ganacsiga loo qabto, dhaqammo badan ayaa weli u baahan in is-dhexgalka fool-ka-foolka ah ee ka yimaada shirarka ganacsiga maaradoonka.
Wasaaradda Ganacsiga waxay si dhow ula shaqeysaa xafiiska Guddoomiyaha, wakaaladaha kale, wakiillada gobolka iyo ururrada horumarinta dhaqaalaha si loo abaabulo loona isku duwo wufuuddan u tagaya dalalka kale. Xaaladaha qaarkood, ergooyinkaan ganacsi waxaa lagu qabtaa riwaayad lala yeesho bandhigyada ganacsiga caalamiga ah. Waqtiyada kale, waxay ku wajahan yihiin dalal cayiman oo Washington ay xiriir ganacsi ama dhaqaale leeyihiin, sida Hindiya, Shiinaha, Kuuriya, Japan ama Mexico.
Kaqeybgalka Ergada Ganacsiga
Waxaa hogaaminaya saraakiil ka socota dhowr hay'adood oo gobolka ah, oo ay ku jiraan Waaxda Ganacsiga iyo mararka qaarkood, Gudoomiyaha Gobolka ama shaqaalihiisa, howlgalada ganacsi waxay u ogolaanayaan ganacsatadu inay abuuraan xiriiro muhiim ah ayna galaan ganacsiyo ganacsi iyo shirar ganacsi oo si weyn u yareyn kara wareegga iibka.
Ergadii hore ee ganacsiga ee Shiinaha, Kuuriya, Japan, Isutagga Imaaraatka Carabta, Hindiya, Boqortooyada Ingiriiska, Fiyetnaam iyo Faransiiska waxay sameeyeen xiriir joogto ah waxayna soo saareen amarro cusub oo loogu talagalay ganacsiyada gobolka.
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka barato ergooyinka ganacsi ee soo socda iyo sida aad uga mid noqon karto wafdi soo socda, la xiriir Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartan ee (206) 256-6100 ama toos ula hadal khabiirka kaalmada dhoofinta kaas oo ku takhasusay qaybtaada ganacsiga
Faa'iidooyinka Ergada Ganacsiga
Helitaanka marin loo helo wakiillada dowladda oo ay adkaan laheyd helitaankooda hadaan la helin howl rasmi ah oo heer dowladeed ah.
Raadi lamaanayaal cusub oo ku saabsan alaabadaada ama adeegyadaada.
Samee xiriir joogto ah oo lala yeesho alaab-qeybiyeyaasha cusub ama kuwa wax iibiya.
Fur suuqyo cusub ama soo hel fursado cusub oo aan weli ahayn aqoonta guud.
Kaqeybgal caalami Bandhigyada ganacsiga qayb yar oo ah kharashka ergada ergada ganacsiga.
Qaado safarro macluumaad ah oo ku saabsan tas-hiilaadka iyo goobaha wax soo saarka. La kulan go'aamiyeyaasha ganacsiga ee muhiimka ah.
Xiriir lala yeesho ganacsiyada kale ee Washington iyo sidoo kale wakiillada hay'adaha gobolka, iyo munaasabadaha la xusho, Guddoomiyaha.
Ergada Tiknolojiyadda Gobolka Washington ee Japan
Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay iskaashi la leedahay Innovation Finders Capital (IFC) si ay u soo qaataan koox xul ah oo ka tirsan shirkadaha Washington sirdoonka macmalka ah (AI) iyo qaybta barashada mashiinka ee ku wajahan hadafka tikniyoolajiyadda ee lagu bartilmaameedsanayo fursadaha ganacsi ee Japan.
Ergooyinkii Ganacsi ee Hore
Japan - Kuuriya
In ka badan 100 wafuud ayaa ku weheliyay Gudoomiyaha Gobolka Jay Inslee socdaal ganacsi oo sagaal maalmood qaatay oo ay ku tageen Korea iyo Japan halkaas oo ay kula kulmeen ganacsiyada heerka sare ah iyo hogaamiyaasha dawlada si kor loogu qaado ganacsiga iyo iskaashiga wax walba laga bilaabo aerospace iyo khamriga ilaa u diyaar garowga xaaladaha degdega ah iyo isbedelka cimilada. Dhowr heshiis oo is afgarad ah ayaa la kala saxiixday, iyagoo albaabada u furay iskaashi caalami ah.
Iyadoo mid ka mid ah dadka macaamiisha ah ee sida ugu dhakhsaha badan u koraya, Hindiya waxay ahayd xulasho dabiici ah oo lagu furay albaabbo cusub oo loogu talagalay ganacsiga, is-weydaarsiga dhaqanka iyo waxaan rajeynayaa, iskaashi ganacsi. Wafdiga gobolka, oo ay hogaamineyso waaxda maal gashiga iyo ganacsiga ee Waaxda Gobolka Washington, waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyey bulshada ganacsatada ah magaalooyin badan oo la booqday iyo ganacsato badan oo Hindi ah ayaa booqday Washington ka dib howlgalka ganacsi ee sahaminta fursadaha maalgashi iyo ballaarinta ee gobolka.
Dad aad u tiro badan ayaa dhagaystay koox xul ah oo ka tirsan shirkadaha tiknoolajiyadda Washington oo wadaagaya sida ay u yihiin hormuudka AI iyo barashada mashiinka. Wafdiga gobolka waxaa hogaaminayay kooxda ganacsiga ee Waaxda Gobolka Washington waxayna bartilmaameedsanayaan fursadaha ganacsi ee Japan. Waftigu wuxuu kulamo fool-ka-fool ah la yeeshay shirkadaha teknolojiyadda Japan iyo maal-gashadayaasha oo ay weheliyaan booqashooyin deg-deg ah oo ay ku tageen shirkadaha tiknoolajiyadda caanka ah. Wax dheeri ah baro ku saabsan waftiga Gobolka Washington.
Si aad wax badan uga ogaato howlaha shaqo ee soo socda iyo sida aad ku noqon karto wakiil, naga soo wac 206-256-6100 ama toos ula hadal khabiirka kaalmada dhoofinta Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartan ee ku takhasusay qaybtaada ganacsi.
Wax dheeri ah baro ku saabsan doorka Gargaarka Dhoofinta Ganacsi Yar-yar ee Waaxda Ganacsiga iyo sidoo kale waajibaadka sharci-dejinta.